Ku Dhagayso Warbaahinta Bulshada 30 Daqiiqo Maalintii. Martech Zone
Dhageyso Warbaahinta Bulshada 30 Daqiiqo Maalintii
Jimce, Maarso 29, 2013 Douglas Karr
Waxaan haysanaa taageerayaal aad u fara badan oo ku saabsan warbaahinta bulshada waxaanan wadaagnaa oo aan kajawaabi doonnaa tan dhammaan dhagaystayaasheena ku saabsan warbaahinta bulshada. Waxaan nahay koox yar, dad faro ku tiris ah, laakiin waxaan u maleynayaa inaan qabanno shaqo weyn oo ah inaan ka caawinno akhristayaashayada maalinta oo dhan oo aan uga jawaabno si ku habboon waqtigooda. Taasi waxay dhahday all hadii waxa kaliya ee aan qabanay ay ahaayeen kormeerid, jawaab celin iyo wadaagida baraha bulshada maalintii oo dhan ma hubo inaan qaban doono wax shaqo ah oo macaamiisheena ay naga doonayaan! Oo waxay ugu dambeyntii bixiyaan biilasha halkan ku wareegsan.
Waxaan taas ku sameynaa adoo adeegsanaya qalab aad u tiro badan. Waa mid ka mid ah sababaha aan u jeclahay qorista degelkan. Soo helitaanka qalab jaban oo ka caawiya shirkadeena kormeerida, ka jawaab celinta iyo kobcinta dhagaystayaasheena ayaa fure u ah suuqgeena iyo guusha warbaahinta bulshada.
Istaraatiijiyadda warbaahinta bulshada ee guuleysata waxay ku saabsan tahay inaad ka shaqeyso caqli badan, oo aan ka sii adkeyn. Ilaa iyo intaad ka tahay shirkad heer shirkadeed, waxaad u baahan tahay oo dhan inaad si dhab ah ugu ruxdo warbaahinta bulshada waa 30 daqiiqo maalintii. Qalabaynta otomaatiga ah sida Pardot si aad u daryeesho qaar badan oo ka mid ah waqtiga qaadashada iyo soo noqnoqoshada, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa qorshe maalmeed si fiican loo qeexay iyo edbinta naftaada ah. Laga soo bilaabo sawirka hoose ee Pardot, Dhageyso Warbaahinta Bulshada 30 Daqiiqo Maalintii.
Tags: 30 daqiiqo qorshecafisotomaatiga suuq geyntaqorshaha warbaahinta bulshada
Maskaxda 101: Mabaadi'da Maskaxda